कतार बाट खोजी गर्दै ७ महिनाको गर्भ लिएर नेपाल आएकी चेलीको पीडा , झुठो बोलेर फसायो…. – Classic Khabar
August 1, 2021 179
उनी पहिलेओ लकडाउनको बेला क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी थिइन् र त्यहिबेला त्यस केटाले उनलाई टिकटकमा म्यासेज गरेको थियो। त्यतिबेला उनले आफूले बिहे पनि गरेको छैन र काठमाडौँबाट पढ्दापढ्दै आएको हो र आफू परीवारको एक्लो छोरो भएको अनि एउटा बहिनी जसको बिहे पनि एकवर्ष अगाडि भएको बताएका थिए। उनीहरू सुरुसुरुमा साथीसाथीको सम्बन्ध बनाएर बोल्दै गए।
उनले त्यी केटाको दाइ र उनका साथीहरूलाई समेत सोधपुछ गर्दा सबैले उसको बिहे नभएको बताएका थिए। एकदिन उनको श्रीमतीको फोन आयो र त्यी चेलीले फोन उठाइन् र कुराकानी गरिन्। कपुरको त पहिले नै चार वर्ष अगाडि बिहे भैसकेको रहेछ र उनको एउटा दुई वर्षको छोरी पनि रहेको थाहा पाइन्। त्यतिबेला सम्म उनको पेटमा बच्चा बसिसकेको थियो र दुई महिना भैसकेको थियो।
उनीसँग त्यतिबेला पैसा पनि थिएन र काम नभइकन बसिरहेकी थिइन्।उनले दिदीहरूलाई पनि सोधिन् र दिदीहरूले पनि त्यस्तो छ भने औ’ष’धि खा’नु भनेर सल्लाह दिएका थिए। कपुर पनि त्योबेला नेपाल आइसकेको थियो र उनले फोब गर्दा उसले आफू काठमाडौँमै भएको र यतै आउन सल्लाह दियो। बच्चा ब सेपछी पहिले उसले आफ्नो साथीलाई फोन गर्न लगाएर फोन गरेको रहेछ तर उनीसँग औषधि किन्ने पैसा नभएर उनले बच्चा फा ल्न स किनन्। भिडियो :-
Prevखब,रदार एमसीसी पास गर्ने कुरा कल्पना पनि नगर, आफ्नो आमालाई बेच्ने कुरा गर्छौ ? भन्दै गर्जिए बिदेशमा दुख पाएर फर्किएका एक युवा – भिडियो सहित
Next७ वर्षपछि आफ्ना श्रीमानको अनुहार देख्न पाएकी श्रीमतीको यस्तो प्रश्न सुनेर उनका श्रीमानले आँखाबाट आँशु झारे र भने ….
सामाजिक सन्जालले पूरा गर्‍यो ३ फुट ४ इन्चकी चर्चित मोडलको सपना